Ny vidiny lafo amin'ny tsy fahombiazan'ny famolavolana tranonkala dia mahazatra loatra. Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 6, 2015 Alakamisy, Jolay 9, 2015 Douglas Karr
Rehefa mamaky ireo antontan'isa roa ireo ianao dia ho gaga. Mihoatra ny 45% amin'ireo orinasa rehetra no tsy manana tranokala. Ary ny an'ny DIY (Do-It-Yourselfers) izay manomboka manangana tranokala, 98% amin'izy ireo no tsy mahomby amin'ny famoahana iray mihitsy. Tsy manisa akory ny isan'ny orinasa manana tranonkala tsy mitondra fiara tsotra izao… izay inoako fa isan-jato manan-danja hafa.
izany infographic avy amin'ny Webydo mamaritra ny olana lehibe amin'ny famolavolana tranonkala tsy mahomby sy ny fahasarotan'ireo vahaolana ary ny filàna fandanjana eo amin'ny endrika sy ny fampandrosoana maro. Manampy izany ny isan'ny amateurs sy ireo fitaovana malemy am-pelatanan'izy ireo, ary mitera-doza ho an'ny orinasa marobe izany.
Eo anelanelan'ny vahaolana DIY sy ireo sehatra marketing marketing atiny B2B, mipoitra ny ampahatelony, manantena ny hanakorontana ny tsenan'ny famolavolana tranonkala. Webydo dia vahaolana B2B tsy miankina ho an'ny mpamorona matihanina maniry ny hamorona tranokala mandroso ho an'ny mpanjifany, miaraka amina endrika namboarina manokana ary tsy manoratra na dia andalana kaody na mpanakarama mpikarama aza.
Tsy nampiasa Webydo aho fa manantena ny handray izany ho an'ny test-drive. Angamba ny olako dia mpamorona bebe kokoa noho ny mpamorona. Matetika aho mahazo aingam-panahy avy amin'ny volavolan'ny olon-kafa ary ampidirina ao amin'ny fisianay tranonkala izany. Faly aho amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny indostria, na izany aza, sy ny fahafahan'izy ireo manangana vahaolana malefaka manova amin'ny toerana ary tarihiny sy ny rano indray mitete fahaiza-manao.
Tsoriko fa tsy mampaninona ahy ny mandany vola amin'ny fampandrosoana. Raha ny marina dia matetika isika no miasa ao ambadiky ny mpamorona mahafinaritra mba hananganana fampiharana haingana sy malefaka kokoa amin'ny volavolain'izy ireo. Pejy roa dia mety hitovy endrika, saingy ny fotodrafitrasa sy ny kaody ifotony mety hiteraka fahasamihafana lehibe amin'ny hafainganan'ny pejy sy ny fihetsiky ny mpanjifa.
Tsy mino aho fa ny olana lehibe atrehin'ny indostrian'ny famolavolana tranonkala dia ireo fitaovana, mino aho fa io no sandan'ny asa. Taona maro lasa izay, nahita mpandahateny iray aho izay niresaka momba ny orinasa iray nandany vola aman'hetsiny nanamboarana ny efitrano malalaky ny orinasan'izy ireo, saingy tsy nety nandany ny ampahany tamin'io tao amin'ny tranonkalany. Ny tranonkalanao no toerana malalanao manerantany. Tsy manana eritreritra faharoa momba ny ROI amin'ny fandriana ao amin'ny efitranonao ianao, fa ianao kosa nikela ary manamaivana ny orinasan-tranonkala sy ny fampandrosoana. Tsy misy dikany izany.
Hitanay aloha ny farany. Niara-niasa tamin'ny orinasa nanana tanindrazana izahay, tranokala DIY izay tsy nahatratra fifamoivoizana ary tsy nitondra fitarihana… nandany vola an'arivony an'arivony na an-tapitrisany dolara aza ny orinasa. Ary nahita orinasa hafa izahay nanaparitaka ny teti-bolany tamin'ny endrika tsara tarehy izay tsy nisy paikady hahazoana tombony, hitazomana ny mpanjifa ary hampiakatra azy ireo.
Ny ankamaroan'ny volanay dia tsy laniana amin'ny famolavolana tranonkala ho an'ny mpanjifanay. Matetika izy io no miasa hadihadio ny fomba hanatsarana ny anjarany eo amin'ny tsena sy hitondrany orinasa bebe kokoa ho an'ny farany ambany. Izay vola lany! Manangana tranokala mahafinaritra ho an'ny mpanjifa izahay amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny sy ny ora ampiasain'ny ankamaroan'ny masoivoho… ny tsy fitovizany dia ny hoe mamokatra vola tokoa ny antsika!
Raha mpamorona tranonkala ianao dia zahao Webydo! Toa fandrosoana mahafinaritra ho an'ny indostria izany.
Tags: tranokala mpankafympamorona b2bmpandraharaha b2bfamolavolana tranonkala b2cCMSfamoronana tranokala famoronanampamorona mifanohitra amin'ny mpamoronadotnetnukedrupalI JimdoJoomlamagentooscommercempamorona matihaninampandraharaha matihaninasquarespaceubracoMalagasy famolavolanatetibola famolavolana tranonkalaindostrian'ny famolavolana tranonkalafamolavolana tranonkalatranonkalateti-bolan'ny tranonkalatranonkalawebydoweeblyWixWordPressYola
Jolay 7, 2015 amin'ny 3:17 PM
Tena mahaliana. Efa nieritreritra izany be dia be fa avy amin'ny fomba fijery ny 'Ahoana no manampy SMB tena tsy saro-takarina hanatsara ny ROI ny varotra?' Tena tiako ny hevitrao momba ity lahatsoratra bilaogy vao haingana ity.